Lix howlood oo kaniisad ah, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Maxaynu toddobaad kasta ugu kulannaa cibaadada iyo tilmaamaha? Miyaanu haysan kari lahayn tukashada, akhriyi mayno Kitaabka Quduuska ah, oo aan dhageysan lahayn khudbad raadiyaha iyadoo dadaal aad u yar guriga ku jirta?
Qarnigii hore, dadku waxay kulmayeen usbuuc walba si ay u dhageystaan ​​Qorniinka - laakiin maanta waxaan akhrin karnaa koobiyadeena Kitaabka Quduuska ah. Marka maxaad guriga joogi weydaa oo aad keligaa wax u akhrinkartaa Kitaabka Quduuska ah? Dhab ahaantii way fududaan lahayd - waana ka jaban tahay sidoo kale. Iyadoo la adeegsanayo tikniyoolajiyad casri ah, qofkasta oo dunida ah wuxuu dhageysan karaa wacdiyeyaasha ugu wanaagsan adduunka toddobaad kasta! Ama waxaan haysan karnaa ikhtiyaar ikhtiyaar ah oo aan dhageysan karnaa khudbadaha inaga quseeya ama mowduucyada aan jecel nahay. Taasi ma noqon laheyd wax cajiib ah?
Hagaag, dhab ahaan maahan. Waxaan rumeysanahay in Masiixiyiintu guryahooda ku nagaadaan in badan oo ka mid ah dhinacyadii muhiimka ahaa ee Kaniisadda. Waxaan rajeynayaa inaan ka hadlo arrimahan qodobka, labadaba inaan ku dhiirigeliyo booqdayaasha daacadda ah inay wax badan ka qaataan kulamadeenna iyo inaan ku dhiirrigeliyo kuwa kale inay ka qaybgalaan adeegyada toddobaadlaha ah. Si loo fahmo sababta aan usbuuc walba ula kulanno, waa wax caawimaad leh in aan isweydiinno nafteena, "Muxuu Eebbe u abuuray Kaniisadda?" Waa maxay ujeedadu? Sida aan wax uga baranno howlaha kaniisadda, waxaan arki karnaa sida kulamadeenna toddobaadlaha ah loogu adeego ujeeddooyin kaladuwan carruurta Ilaah.
Waxaad arkaysaa, amarradii Ilaahay maahan amarro aan sabab lahayn, waa inaan eegno haddii aannu boodno markii uu yiraahdo boodso. Maya, amarradiisa waxay u adeegaan wanaaggeenna. Dabcan, haddii aan nahay Masiixiyiin da 'yar, waxaa laga yaabaa inaanan fahmin sababta uu u amro waxyaabo qaarkood oo ay tahay inaan adeecno xitaa ka hor inta dhammaanteenna aan fahansaneyn sababaha. Waxaan kaliya aaminsanahay Ilaah inuu si fiican u yaqaanno oo aannu u qabanno wuxuu isagu leeyahay. Marka qof dhalinyaro ah oo Masiixi ah ayaa aadi kara kaniisadda maxaa yeelay waxaa si fudud looga filaa Masiixiyiinta. Qofka da 'yarta ah ee Masiixiga ah wuu imaan karaa adeegga si fudud sababta oo ah Cibraaniyada 10,25 ayaa leh, "Yaanan uga tagin kulamadeenna ..." Ilaa iyo hadda, waa wax fiican. Laakiin markii aan ku weynaaday iimaanka, waa inaan helnaa fahan qoto dheer oo ku saabsan sababta uu Eebbe ugu amro dadkiisa inay isugu yimaadaan.
Markaan fiirineyno mowduucan, aan ku bilowno adigoo dhahda in warqaddii Cibraaniyada aysan ahayn buugga kaliya ee amraya Masiixiyiinta inay soo aruuriyaan. Ciise wuxuu xertiisii ​​ku yidhi, Midkiinba midka kale ha jeclaado (Yooxanaa 13,34). Markuu Ciise yiri "midba midka kale", isagu looma jeedinayo waajibka ah inaan dadka oo dhan wada jeclaano. Waxayse ka dhigan tahay baahida loo qabo in xertuhu jeclaadaan xeryaha kale - waa inay noqotaa jacayl labada dhinac ah. Jacaylkuna waa astaan ​​lagu garto xertii Ciise (V. 35).
Jacaylka isweydaarsiga looma muujiyo shirarka shilka ah ee suuqgeynta iyo munaasabadaha cayaaraha. Amarka Ciise wuxuu farayaa in xertiisu ay had iyo goor la kulmaan. Masiixiyiintu waa inay yeeshaan xiriir joogto ah oo ay la yeeshaan Masiixiyiinta kale. "Aynu wanaagga u samayno dadka oo dhan, laakiin inta badan saaxiibbada iimaanka," ayuu qoray Paul (Galatiya 6,10). Si aan u addeecno amarkan, waxaan u baahan nahay inaan ogaano kuwa ay yihiin walaalaheena aan aaminka nahay. Waa inaan aragnaa waana inaan aragnaa baahidooda.
Midkiinba midka kale u adeega, ayuu Bawlos warqad u qoray kiniisadda Galatiya (Galatiya 5,13). In kasta oo ay ahayd inaan u adeegno kuwa aan rumaysadka lahayn hab uun, Bawlos uma adeegsanno aayaddan inuu sidan noogu sheego. Aayaddan dhexdeeda, isagu ma uu ina farayo inaan adduunka u adeegno oo isagu amri maayo adduunka inuu ina adeego. Hase yeeshe, wuxuu amraa wadajirka ka dhexeeya kuwa raaca Masiixa. Mid wuxuu qaadayaa culeyska midka kale, sidaas darteed waad oofin doontaa sharciga Masiixa " (Galatiya 6,2). Bawlos wuxuu la hadlayaa dadka doonaya inay addeecaan Ciise Masiix, wuxuu u sheegayaa mas'uuliyadda ay ku leeyihiin rumaystayaasha kale. Laakiin sidee ayaan midba midka kale uga caawin karaa inuu qaado culeyska markii aanan ogeyn waxa culeyskaasi yahay - oo sidee baan ku ogaan karnaa ilaa aan si joogto ah ula kulanno.
"Laakiin haddaan nuurka ku soconno ... waxaan wadaagnaa iskaashi," ayuu qoray Johannes (1 Yooxanaa 1,7). Yooxanaa wuxuu ka hadlayaa dadka ku socda iftiinka. Wuxuu ka hadlayaa bulshada ruuxiga ah, ee ma ahan inuu si caadi ah ula dhaqmo gaalada. Markaan ku socono iftiinka, waxaan raadinaa rumaystayaal kale oo aan wehel ku nahay. Bawlos wuxuu u qoray wax sidan oo kale ah: "Midba midka kale aqbala" (Rooma 15,7). Noqo mid saaxiibtinimo leh oo is ixtiraama oo midkiinba midka kale cafiyo, (Efesos 4,35). Masiixiyiintu waxay leeyihiin mas'uuliyad gaar ah midba midka kale.
Waxaan ka akhrinay Axdiga Cusubi dhammaan Masiixiyiintii ugu horreeyay ee isu soo urursaday inay cibaado wada jir ah u wada dabbalaan, waxna ku bartaan, noloshooda midba midka kale la wadaagaan (tusaale ahaan Falimaha 2,41: 47). Meel kasta oo Bawlos tago, wuxuu aasaasay kaniisado halkii uu ka tegi lahaa rumaystayaasha firidhsan. Waxay danaynayeen inay wadaagaan iimaankooda iyo qiiradooda midba midka kale. Kani waa hannaan Baybal ah.
Laakiin maalmahan dadku waxay ka cawdaan inayan waxba ka qaadin khudbada. Taasi waxay noqon kartaa run, laakiin dhab ahaan maahan cudurdaar in aadan imaan shirarka. Dadka noocaas ah waa inay beddelaan aragtidooda, min “qaadashada” ilaa “siinta”. Uma tagno cibaadada oo kaliya inaan qaadno, laakiin sidoo kale siino - inaan Ilaah ku caabudno qalbigeenna oo dhan iyo inaan u adeegno xubnaha kale ee kaniisadda.
Sidee ayaan midba midka kale ugu adeegi karnaa adeegyada kaniisadda? Adiga oo carruurta baraya, ka caawinaya nadiifinta dhismaha, heesaha iyo u ciyaarista muusig gaar ah, dejinta kursi, salaanta dadka, iwm Waxaan abuurnaa jawi ay dadka kale wax uga qaadan karaan khudbada. Waxaan leenahay wehelnimo iyo baahiyo aan u duceyno iyo waxyaabaha aan sameyn karno si aan u caawino kuwa kale inta lagu jiro usbuuca. Haddii aadan wax ka helin khudbada, ugu yaraan ka qayb qaado adeegga si aad dadka kale u siiso.
Bawlos wuxuu qoray: "Midkiinba midka kale ha dhiirrigeliyo oo midkiinba midka kale ha sii dhiso" (2 Tesaloniika 4,18). Aynu dhiirrigelinno midba midka kale jacaylkiisa iyo camal wanaagsan sameeyo (Cibraaniyada 10,24). Tani waa sababta saxda ah ee lagu bixiyay macnaha guud ee looga baahan yahay shirarka joogtada ah ee Cibraaniyada 10,25. Waa inaan ku dhiirrigelinaa dadka kale, inay noqdaan il laga helo ereyo wanaagsan, wax kastoo run ah, waxa la jecel yahay oo sumcad wanaagsan leh.
Tusaale ka soo qaad Ciise. Wuxuu u soo booqday sunagogyada si joogto ah oo wuxuu si joogto ah u dhagaysan jiray akhrinta buugaagta oo aan waxba ka tarin inuu fahmo, laakiin weli cibaadada ayuu u aaday. Laga yaabee inay caajiso nin aqoonyahan ah sida Paul, laakiin taasi taasi kama hor joogsanin.
Waajib iyo rabitaan
Dadka aaminsan inuu Ciise ka badbaadiyay dhimashada weligeed ah waa inay runtii ku farxaan. Waxay rajeynayaan inay la kulmaan kuwa kale si ay u amaanaan badbaadiyahooda. Dabcan, mararka qaarkood waxaan haysannaa maalmo xun oo runtii ma dooneynno inaan aadno kaniisadda. Laakiin xitaa haddaanu ahayn waxa aan doonayno xilligan, wali waa waajibkayaga. Kaliya nolosha uma mari karno oo waxaan sameyn karnaa oo keliya waxaan dareemeyno - ma ahan haddii aan raacno Ciise oo ah Rabbigeenna. Isagu kuma uusan dilin inuu sameeyo doonistiisa, laakiin aabaha. Mararka qaarkood waa meesha aan ku dambeysanno. Haddii wax kasta oo kale dhacaan, sida ku xusan hadalkii hore, aqri tilmaamaha hawlgalka. Tilmaamaha ayaa tilmaamaya inaan joogno adeegyada.
Laakiin waa maxay sababta? Kaniisadda maxaa loogu talagalay? Kaniisadda waxay leedahay howlo badan. Waxaa loo qaybin karaa saddex qaybood - kor, gudaha iyo dibedda. Qorshahan ururku, sida qorshe kasta, wuxuu leeyahay labadaba faa'iidooyin iyo xadeyn. Way fududahay oo fududahay way fiicantahay.
Laakiin ma muujineyso xaqiiqda ah in xiriirkeenna sare uu labadaba leeyahay mid gaar ah iyo muujinta dadweynaha. Waxay qarinaysaa xaqiiqda ah in cilaaqaadkayaga ka dhex dhaca kiniisadda aanu si isku mid ah ula mid ahayn qof kasta oo ka tirsan kaniisadda. Ma muujineyso in adeegga lagu sameeyo gudaha iyo dibaddaba, labadaba kaniisada gudaheeda iyo dibediintaba bulshada iyo xaafada.
Si loo muujiyo dhinacyo dheeraad ah oo ka mid ah shaqada Kaniisadda, Masiixiyiinta qaar waxay isticmaaleen qorshe afar ama shan laab ah. Waxaan u isticmaali doonaa lix qaybood maqaaladan.
Xiriirkayaga aan la leenahay Ilaah waa mid gaar ah iyo mid guud labadaba waana u baahan nahay labadaba. Aynu ku bilowno xiriirka guud ee naga dhexeeya Ilaah - cibaadada. Dabcan waa macquul in la caabudo Ilaah markaan kali nahay, laakiin ereyga cibaadadu badanaa waxay muujisaa wax aan ku qabanno dadweynaha. Ereyga Ingriisiga cibaadada (cibaadada) waxay la xidhiidhaa qiimaha erayga (mudan). Waxaan cadeyneynaa qiimaha ilaahay markii aan caabudno.
Soojeedintan qiimaha waxaa lagu muujiyey si gaar ah, salaaddayada, iyo si ficil ah ereyada iyo ammaanta. 1 Butros 2,9 wuxuu sheegayaa in naloogu yeedhay inaan wacdinno amaanta Ilaah. Tani waxay soo jeedineysaa bayaan guud. Axdigii Hore iyo Axdigii Hore labaduba waxay muujinayaan sida ay dadka Ilaahay u wada caabudaan, beel ahaan, Ilaahow.
Qaabka Baybalka ee Axdiyada Hore iyo Axdiga Cusub wuxuu muujinayaa in heesaha badiyaa ay qayb ka yihiin cibaadada. Heesaha ayaa muujinaya qaar ka mid ah shucuurta aan u leenahay Ilaah. Heesaha ayaa muujin kara cabsi, aaminaad, jacayl, farxad, kalsooni, baqdin iyo dareemo aad u tiro badan oo aan ku leennahay xiriirka aan la leennahay Ilaah.
Dabcan, maahan in qof walba oo kaniisadda jooga isku dareen isku dareen ah waqti isku mid ah, laakiin weli waan wada heesaa. Xubnaha qaar ayaa si isku mid ah u soo bandhigi lahaa shucuuro isku mid ah, oo heeso kala duwan iyo siyaabo kala duwan. Wali waan isla heesnaa. Midkiinba midka kale ha ku dhiirrigeliyo Sabuurro iyo heeso ammaan ah iyo gabayo xagga ruuxa ah (Efesos 5,19). Si tan loo sameeyo waa inaan la kulannaa!
Muusiggu waa inuu muujiyo midnimo - laakiin badanaa waa sabab khilaaf. Dhaqamo kaladuwan iyo kooxo kala jaad ah ayaa siyaabo kaladuwan Ilaah ugu sharfa. Dhaqan kala duwan ayaa laga matalaa degmo kasta. Xubnaha qaarkood waxay rabaan inay bartaan heeso cusub; qaar baa raba inay isticmaalaan heesaha gaboobay. Waxay u egtahay in Ilaah jecel yahay labada. Wuxuu jecel yahay kunka sano kun ee sabuurrada; wuxuu kaloo jecel yahay heeso cusub. Waxaa kale oo muhiim ah in la ogaado in qaar ka mid ah heesaha jir - sabuusyada - amraan heeso cusub:
Kuwiinna xaqa ahow, Rabbiga ku reyreeya, Kuwa cibaadalaawayaasha ahu si qumman ayay isaga ku ammaani doonaan. Rabbiga ugu mahad naqa kataarad, Isaga u ammaana Sabuurrada toban xadhig leh. Gabay cusub isaga ugu gabya; wuxuu ku ciyaarayaa si qurux badan xargaha leh cod faraxsan! " (Sabuurradii 33,13).
Muusikadayada waa inaan tixgelinaa baahiyaha dadka laga yaabo inay booqdaan kaniisaddeena markii ugu horraysay Malachi. Waxaan u baahanahay muusig ay ku helaan micno, muusig muujinaya farxad sida si ay ugu fahmaan inuu yahay mid faraxsan. Haddii aan kaliya u heesno heeso aan jecel nahay, waxay micnaheedu tahay inaan ka taxaddarno wanaaggeenna annaga oo aan ka fiirsanno dadka kale.
Ma sugi karno in dad cusub ay yimaadaan adeegga kahor inta aynaan bilaabin barashada qaar ka mid ah heesaha casriga ah. Waa inaan barannaa hada si aan ugu heesno macno ahaan. Laakiin muusiggu waa hal shay oo caabuda. Cibaadada ayaa ka badan oo keliya muujinta shucuurtayada. Xiriirka aan la leenahay Ilaah sidoo kale waxaa ku jira maskaxdeena, fikirradeenna. Qayb ka mid ah isweydaarsiga aan la sameyno Ilaah wuxuu qaadanayaa qaab tukashada. Annagoo ah dadka kullamada Ilaah waxaan la hadlaynaa Ilaah. Waxaan ku ammaaneynaa ma ahan oo keliya gabayada iyo heesaha, laakiin sidoo kale ereyada caadiga ah iyo luqadda. Waana tusaalaha kitaabiga ah ee aan ku wada tukano labada shaqsiba iyo shaqsi ahaanba.
Ilaah jacayl kaliya ma aha laakiin sidoo kale waa run. Waxaa jira qayb shucuureed iyo xaqiiqeed. Marka waxaan ubaahanahay runti cibaadadayada waxaanan ka helnaa runta erayga Eebbe. Baybalku waa awooddeena ugu dambeysa, oo ah aasaaska wax kasta oo aan sameyno. Wacyigelintu waa inay ku salaysnaato maamulkan. Xitaa heesahayadu waa inay ka turjumaan runta.
Laakiin runtu ma aha figrad madhan oo aan kaga wada hadli karno shucuur la’aan. Runta Eebbe waxay ku dhacdaa nolosheena iyo quluubteenna. Jawaab ayey naga rabtaa annaga. Waxay u baahan tahay qalbiyadeena oo dhan, maskaxdeena, nafteena iyo xooggeenna. Taasi waa sababta wacdiyadu ugu baahan yihiin inay la xiriiraan nolosha. Wacdiyadu waa inay gudbiyaan fikradaha saameeya nolosheena iyo sida aan uga fikirno una dhaqano maalmaha Sabtida, Isniinta, Talaadooyinka, iwm guriga iyo shaqada.
Wacdiyadu waa inay ahaadaan kuwo run ah kuna saleysan Qorniinka. Wacdiyadu waa inay ficil noqdaan, wax ka qabtaan nolosha dhabta ah. Wacdiyadu sidoo kale waa inay ahaadaan kuwo qiiro leh oo si sax ah u kiciya jawaab qalbi ka timid. Cibaadadayada sidoo kale waxaa ka mid ah dhageysiga ereyga Ilaah iyo ka jawaabista toobinta dembiyadayada iyo farxadda badbaadada uu na siiyo.
Waxaan ku dhageysan karnaa wacdiyada guriga, ama MC / CD ama raadiyaha. Waxaa jira khudbado fara badan oo wanaagsan. Laakiin tani maahan waayo-aragnimo buuxda oo ka-qaybgalka adeegga. Sida nooc cibaado, waa qayb kaqeybgal ah. Ma jiro wax cibaado la wadaago oo cibaado ah oo aan ku wada heesaan amaan oo wada jir ah, oo si wada jir ah uga jawaabaya Ereyga Eebbe, kuna waaninaya midba midka kale inuu runta geliyo dhaqankeena.
Dabcan, qaar ka mid ah xubnaheenna kaniisadda uma imaan karaan caafimaadkooda awgood. Waxbaa kaa maqan - badanaaba kuwaan aad ayaan u garanayaa. Waan u duceyneynaa iyaga waxaan sidoo kale ognahay inay tahay waajibkayaga waajibka ah inaan booqanno si aan ugu suurta gelinno inay wadajir wax ku caabudaan (Yacquub 1,27).
In kasta oo Kiristanka guriga ku saleysan laga yaabo inay u baahdaan caawimaad jireed, waxay had iyo goor u adeegaan kuwa kale shucuur ahaan iyo ruux ahaanba. Si kastaba ha noqotee, "guriga joog" Masiixiyiintu waa ka reebban yihiin oo ku saleysan baahi. Ciise ma uusan dooneynin xertiisu kuwa awoodda u leh inay sidan sameeyaan.
Edbinta ruuxiga ah
Adeegyadu waa qayb ka mid ah cibaadadayada. Ereyga Eebbe waa inuu galaa qalbiyadeenna iyo maskaxdeenna si uu u saameyn ugu yeesho wax kasta oo aan usbuuca qabanno. Cibaadadu way beddeli kartaa qaabkeeda, laakiin waa inaysan waligeed joogsan. Qayb ka mid ah jawaabtayada aan u helno Ilaah waxaa ka mid ah ducada shakhsi ahaaneed iyo daraasadda Baybalka. Khibraddu waxay muujineysaa in kuwaani gabi ahaanba ay lagama maarmaan u yihiin koritaanka. Dadka ku koraan xagga ruuxa waxay jecel yihiin inay wax ku bartaan Ilaahay eraygiisa. Waxay jecel yihiin inay wax ka qabtaan codsiyadooda isaga, inay la wadaagaan noloshooda isaga, inay isaga la socdaan, inay ka warqabaan joogitaankiisa joogtada ah ee noloshooda. Ujeedada aan u leenahay Eebbe waxay kujirtaa qalbiga, maskaxda, nafta iyo xooggeenna. Waa inaan lahaano rabitaan tukasho iyo waxbarasho, laakiin xitaa haddii aysan ahayn rabitaankeena, waxaan wali ubaahanahay inaan ku celcelinno.
Waxay i xasuusineysaa talooyinka John Wesley mar la siiyay. Halkaas markay ahayd noloshiisa, wuxuu yidhi, wuxuu lahaa garasho garasho ee masiixiga, laakiin ma uusan dareemin iimaanka qalbigiisa. Sidaas darteed waxaa lagu waaniyey: U wacdiya iimaanka ilaa aad kahesho iimaanka - hadaad haysatidna, runtii waad faafin doontaa! Wuxuu ogaa inuu waajib ku ahaa wacdinta iimaanka, marka waa inuu guddaa waajibaadkiisa. Oo wakhti ka dib, Ilaah wuxuu siiyey wixii uu haystay. Wuxuu ku siiyay iimaanka aad qalbiga ka dareemi karto. Wixii uu hore uga qabtay dareen waajib ah, wuxuu hadda sameeyay rabitaan. Ilaah wuxuu siiyey wixii uu u baahnaa. Ilaahay isla sidii ayaa anagana ina yeeli doona.
Salaadda iyo daraasadda mararka qaarkood waxaa loo yaqaanaa edbinta ruuxiga ah. "Edbinta" waxay u muuqan kartaa ciqaab, ama waxaa laga yaabaa inay tahay wax aan fiicnayn oo aan ku qasbeyno inaan isku qasbeynno inaan sameyno. Laakiin macnaha saxda ah ee ereyga edbinta ayaa ah shay inaga dhiga arday, taas oo ah, waxay na baartaa ama naga caawisaa barashada. Qarniyo badan, hoggaamiyeyaasha diinta waxay ogaadeen in nashaadaadyada qaarkood ay naga caawinayaan inaan Ilaahay wax ka baranno.
Waxaa jira dhaqamo badan oo ina caawiya sidii aan ula socon lahayn Ilaah. Xubno badan oo ka tirsan Kaniisadda ayaa si fiican u yaqaan salaadda, barashada, ka-fiirsashada, iyo soonka. Waxaad kaloo ka baran kartaa edbiyada kale, sida fududeynta, deeqsinimada, dabaaldegyada ama booqashada carmallada iyo agoonta. Imaatinka adeegyada sidoo kale waa edbin xagga ruuxa ah oo kobcisa xiriirka shaqsiyeed ee lala yeesho Ilaah. Waxaan sidoo kale ka baran karnaa waxyaabo badan oo ku saabsan salaadda, barashada Kitaabka Quduuska ah, iyo caadooyinka kale ee ruuxiga ah anaga oo booqanna kooxo yar yar oo aan aragno sida Masiixiyiinta kale ay ugu dhaqmaan noocyada cibaadada.
Iimaanka dhabta ahi wuxuu horseedaa addeecitaan dhab ah - xitaa haddii addeecidani aysan fiicnayn, xitaa haduu caajis yahay, xitaa haddii ay nooga baahan tahay inaan beddelno dhaqankeenna. Waxaan isaga ugu caabudnaa ruuxa iyo runta, kaniisadda, guriga, shaqada, iyo meel kastoo aan tagno. Kaniisadda waxay ka kooban tahay dadka Ilaah iyo dadka Eebbe waxay leeyihiin cibaado gaar ah iyo mid dadweyneba. Labaduba waa howlaha muhiimka ah ee kaniisada.
Axdiga cusub dhexdiisa, waxaan ku aragnaa sida hoggaamiyeyaasha ruuxiga ahi dadka kale wax u barayaan. Tani waa qayb ka mid ah qaab nololeedka masiixiga; waa qayb ka mid ah amarkii weynaa: "Haddaba taga oo quruumaha oo dhan xer ka dhig ... oo bar iyaga inay dhawraan wax walba oo aan idinku amrayay" (Matayos 28,1920). Qof walba waa inuu noqdaa xer xer ama macalin inta badanna waxaan nahay isku waqti. "Midba midka kale ha baraan oo ku waaniyo xigmad oo dhan" (Kolosay 3,16). Waa inaan wax ka barannaa midba midka kale, Masiixiyiinta kale. Kaniisaddu waa machad waxbarasho.
Bawlos wuxuu Timoteyos ku yidhi: "Wixii aad iga maqashay hortiin badan markhaatiyaal amarro kuwa aaminka ah oo awooda inay dadka kale baraan" (2 Timoteyos 2,2). Qof kastoo Masiixi ah waa inuu awoodaa inuu baro aasaaska iimaanka, inuu ka jawaabo rajada aan ku leennahay Masiixa.
Ka waran kuwa horey wax u soo bartay? Waa inaad noqotaa macalin si aad runta ula wadaagto jiilalka soo socda. Sida iska cad wax badan ayaa laga barayaa wadaadada. Laakiin Bawlos wuxuu ku amrayaa dhammaan Masiixiyiinta inay wax bartaan. Kooxo yaryar ayaa tan fursad siiya. Masiixiyiinta qaangaarka ah way bari karaan ereyga iyo tusaale labadaba. Waad u sheegi kartaa dadka kale siduu Masiixu u caawiyay. Haddii waxay rumeysan yihiin daciif, waxay raadin karaan dhiirrigelinta kuwa kale. Haddii waxay rumeysan yihiin xoog badan yihiin, waxay isku dayi karaan inay caawiyaan kuwa liita.
Ma wanaagsana in ninku keligiis yahay; mana ahan wax wanaagsan in Masiixi yahay kaligiis. Sidan ayay ufiican tahay laba in keli la ahaado; maxaa yeelay, iyagu waxay leeyihiin mushahar wanaagsan dhibaatadooda. Haddii midkood ku dhaco, saaxiibkiis ayaa caawinaya isaga. Hoog waxaa leh kuwa keligood markay dhacaan! Markaas cid kale oo caawinaysa ma jirto. Xitaa marka laba ay isku dhow yihiin, way kululaadaan; sidee qof keli ahi u kululaan karaa? Mid ayaa laga yaabaa in laga adkaado, laakiin laba ayaa iska caabin kara, xarig saddex-geesood ah si fudud uma jeexjeexo laba ” (Wacdiyaha 4,9: 12).
Waxaan ka caawin karnaa midba midka kale kobcintiisa isagoo ka wada shaqeynaya. Xusuus-qoristu badanaa waa geedi socod wadaag ah, hal xubin wuxuu caawiyaa xubin kale. Laakiin xerta qaarkood ayaa si qulqulaya u sii qulqulaya oo si cad diirada u saara. Ilaah wuxuu go'aansaday dadka qaar ee kaniisaddiisa in ay sidaa sameeyaan oo keliya: “Oo wuxuu u doortay rasuullo, qaarna nebiyo, qaarna wacdiyayaal, qaarna adhijirro iyo macallimiin, sidaas oo quduusiinta ahna loogu diyaariyey shaqada shuqulka. Tani waa in la dhiso jidhka Masiixa ilaa aan dhammaanteen wada gaadhno midnimada rumaysadka iyo aqoonta Wiilka Ilaah, oo ah ninka wax ku oolka ah, oo loo dhammaystiro buuxinta Masiixa. (Efesos 4,11: 13).
Ilaah wuxuu siiyaa hoggaamiyeyaal doorkoodu inuu u diyaariyo kuwa kale doorarkooda. Natiijadu waa koritaanka, qaan gaadhnimada, iyo midnimada haddii aan u oggolaanno in hawshu u socoto sidii Ilaahay ugu talo galay. Qaar ka mid ah koritaanka Christian iyo barashada waxay ka yimaadaan asxaabta; waxyaabaha qaarkood waxay ka yimaadaan dadka iyagu leh shaqo gaar ah oo ku sugan Kaniisadda waxbaridda iyo tusaalaha nolosha Masiixiyiinta. Dadka keligood keliyeeya waxay seeggaan qaybtan aaminaadda.
Kaniisad ahaan, waxaan xiiseyneynay barashada. Waxay ahayd danteena inaan ogaano runta ku saabsan mowduucyo badan intii suurtagal ah. Waxaan jeclaan lahayn inaanu baranno Kitaabka Quduuska ah. Hagaag, waxaad moodaa in qaar ka mid ah qiiradiias ay lumeen. Malaha tani waa natiijada lama huraanka ah ee isbeddelka caqiido ahaan. Laakiin waa inaan dib u soo celinaa jaceylka waxbarasho ee aan horey u helnay.
Waxaan haynaa waxyaabo badan oo aan baranno - iyo waxyaabo badan oo la dabaqi karo. Kaniisadaha maxalliga ahi waa inay bixiyaan barashada Kitaabka Quduuska ah, fasallo loogu talo galay rumaystayaasha cusub, baridda wacdinta, iwm. Waa inaan ku dhiirrigelino dadka shaqo doonka ah iyaga oo sii daaya, tababarna, siinaya qalab, iyaga siinaya xakameyn iyo ka fogaanshaha iyaga!
Bulshadu waxay si cad u tahay xiriir wada jir ah oo dhex mara Masiixiyiinta. Dhammaanteen waa inaan siino oo aan helno wehelnimo. Dhammaanteen waa inaan siinnaa oo helno jacayl. Kulamadeenna toddobaadlaha ah waxay muujinayaan in beeshu muhiim noo tahay, taariikh ahaan iyo waqtigan xaadirka ah. Bulshadu macnaheedu waa wax aad uga badan in ay midba midka kale uga wada hadlaan arrimaha isboortiga, xanta iyo wararka. Waxay ka dhigan tahay in nolosha la wadaago midba midka kale, la wadaago dareennada, qaadidda culeysyo wadaagga ah, is-dhiirrigelinta midba midka kale iyo caawinta kuwa baahan.
Dadka badankood waxay xirtaan maaskaro si ay baahiyahooda uga qarsadaan kuwa kale. Haddaan runtii rabno inaan is caawino, waa inaan isku dhowaannaa si aan u eegno maskada. Taas macnaheedu waa in aan dhowrno maaskarada u gaarka ah si kuwa kale ay u arki karaan baahiyaheenna. Kooxo yaryar ayaa ah meesha ugu wanaagsan ee tan lagu sameeyo. Waxaan inbadan baranaa dadka oo waxaan dareemeynaa amaan. Badiyaaaba way ku xoog badan yihiin meelaha aan liidan nahay waxaanuna ku xoog badanahay meelaha ay daciifka yihiin. Marka labadeennuba way sii xoogaystaan ​​anagoo is taageeraya. Xitaa Rasuul Bawlos, inkasta oo uu ahaa nin aamin badan, wuxuu rumeysan yahay in Masiixiyiinta kale ay xoojin doonaan iimaankiisa (Rooma 1,12).
Waayihii hore dadku inta badan ma dhaqaaqin taas. Bulshooyinka ay dadku is ogaayeen way fududahay in la dhiso. Laakiin bulshooyinka maanta ka jira warshadaha, dadku badanaa ma yaqaanaan deriskooda. Dadku badanaa waxay ka soocaan qoysaskooda iyo asxaabtooda. Dadku waxay xirtaan maaskaro markasta, marna ma dareemaan nabadgelyo ku filan inay dadka u sheegaan qofka ay runtii ku jiraan gudaha.
Kaniisadihii hore uma aysan baahnayn inay xoogga saaraan kooxo yaryar - iyagu iskood bay u sameysteen Sababta aan ugu baahan nahay inaan maanta ku nuuxnuuxsano waxay tahay in bulshada waxbadan iska badashay. Si runtii loo dhiso isku xirnaansho shaqsiyadeed oo qeyb ka noqon kara kaniisadaha masiixiga, waa inaan qaadnaa dariiqyo si aan u sameysanno saaxiibtinimo Christian / daraasad / goob duco ah.
Haa, waqti ayey qaadan doontaa. Runtii waqti ayey qaadataa si ay ula noolaato masuuliyadeena Christian. Waqti ayey qaadataa in loo adeego kuwa kale. Waxay sidoo kale qaadataa waqti si loo ogaado adeegyada ay u baahan yihiin. Laakiin haddii aan aqbalay Ciise inuu Sayidkeenna yahay, waqtigeennu ma aha annaga. Ciise Masiix wuxuu sameeyaa shuruudaha nolosheena. Wuxuu dalbanayaa dadaal buuxa, Masiixiyad been ah maleh.
Markaan kuqoro "adeeg" qayb gaar ah halkan, waxaan xooga saarayaa shaqada jireed, ee ma ahan adeega barista. Macalinku sidoo kale waa mid cagaha wax maydiya, waa qofka muujiya muhiimada Masiixiyada isagoo samaynaya waxa Ciise sameyn lahaa. Ciise wuxuu daryeelay baahiyo jireed sida cuntada iyo caafimaadka. Wuxuu naftiisa u bixiyay annaga ahaan jir ahaan. Kaniisaddii hore waxay bixisay caawimaad jir ahaaneed iyadoo la wadaagi jirtay alaabteeda dadka baahan oo ay hadiyado ugu ururiso kuwa gaajaysan.
Bawlos wuxuu noo sheegayaa in shaqada lagu qabto Kaniisadda dhexdeeda. "Sidaas darteed, inta aan wali waqti haysanno, aan qof walba wanaag u samaynno, laakiin aan inta ugu badan saaxiibbada la nahay saaxiibbada." (Galatiya 6,10). Dadka ka soocaya kuwa kale ee rumaystayaasha ah ayaa waxba ka waaya aragnimada Masiixiyiinta. Fikradda ah hadiyadaha ruuxiga ah aad ayey muhiim u yihiin halkan. Ilaah midkeenii wuxuu geliyey jidh qudha "anfaca dhamaan" (1 Korintos 12,7). Midkeen kasta wuxuu leeyahay hadiyado caawin kara dadka kale.
Maxaad hadiyado ruuxi ah haysataa? Waad tijaabin kartaa si aad u ogaato, laakiin imtixaanka badiyaa runtii waxay kuxirantahay waaya-aragnimadaada. Maxaad sameysay horaantii hore ee lagu guuleystey? Maxaad u maleyneysaa inaad ku fiican tahay? Sideed u caawisay dadka kale waayihii hore? Tijaabada ugu wanaagsan ee hadiyadaha ruuxiga ahi waa adeega bulshada masiixiga. Isku day doorarka kala duwan ee Kaniisadda weydiina kuwa kale waxa aad ku fiicantahay. Isqoris ikhtiyaari ah Xubin kasta waa inuu lahaadaa ugu yaraan hal door kaniisadda. Mar labaad, kooxo yaryar ayaa ah fursad aad u fiican oo loogu talagalay adeeg wadaagga. Waxay bixiyaan fursado badan oo shaqo iyo fursado badan oo jawaab celin ah oo ku saabsan waxaad si fiican u sameyso iyo waxaad jeceshahay.
Bulshada Masiixiyiintu waxay sidoo kale u adeegaa adduunka nagu wareegsan, kaliya ma aha ereyga, laakiin sidoo kale ficillada wehelinaya ereyadan. Ilaah ma uusan hadlin oo keliya - wuxuu sidoo kale sameeyay ficil. Ficilku wuxuu muujin karaa in jacaylka Eebbe ka dhex shaqeeyo qalbiyadeenna isagoo caawinaya kuwa saboolka ah, isagoo siiya kuwa qalbi qaboojiya, isaga oo ka caawiya dhibanayaashu inay macno u yeeshaan noloshooda. Waa kuwa u baahan caawimaad wax ku ool ah oo badanaa ka jawaaba farriinta injiilka.
Adeeg jireed ayaa siyaabaha qaarkood loogu arki karaa inay tahay taageerada injiilka. Waxaa loo arki karaa hab lagu taageerayo wacdinta. Laakiin qaar badan oo adeeg ah waa in loo sameeyaa si shuruud la'aan ah iyaga oo aan isku deyin inay soo celiyaan waxna. Waxaan u adeegnaa si fudud maxaa yeelay Ilaah wuxuu ina siiyay fursado qaarna indhahayaga u furay si aan u aqoonsanno baahi. Ciise ayaa quudiyey oo bogsiiyey dad badan isagoon u yeerin markiiba si ay u noqdaan xertii. Wuxuu u sameeyay sababta oo ah waa in la sameeyo oo wuxuu arkay baahi uu ku yareyn karo.
“Taga oo dunida u soo baxa oo injiilka ku wacdiya” ayuu Ciise ina farayaa. Si aan u daacadno, waxaan haysannaa qol badan oo hagaajinta aaggan. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa inaan aaminsanahay caqiidadeenna. Dabcan, dadku lama beddeli karo ilaa aanu Aabbuhu u yeedhin, laakiin xaqiiqadan macnaheedu maahan inaynaan injiilka ku wacdiyin!
Si aan u noqonno wakiillo wax ku ool ah oo ah farriinta injiilka, waxaan u baahan nahay isbeddel dhaqameed kaniisadda dhexdeeda dhexdeeda. Kuma qanacsanaan karno in dad kale ay tan sameeyaan. Kuma qancin karno shaqaalaynta dadka kale inay tan ku sameeyaan raadiyaha ama joornaal. Noocyadan wacdinta ah ma khaldan yihiin, laakiin kuma filna.
Wacyigelintu waxay u baahan tahay weji shaqsiyeed. Markii Ilaah doonayay inuu farriin u diro dadka, Wuxuu u adeegsaday dadka sidaas. Wuxuu u diray wiilkiisa, Eebbe jidhkiisa inuu wacdiyo. Maanta wuxuu u dirayaa carruurtiisa, dadka ay ku dhex noolyihiin Ruuxa Quduuska ah, inay ku wacdiyaan farriinta oo ay ku siiyaan foomka saxda ah dhaqan kasta.
Waa inaan noqonaa firfircoonaan, diyaar u nahay, oo aad u xiiso badan inaan la wadaagno iimaanka. Waxaan u baahanahay xamaasad injiilka, xamaasad ugu yaraan gaarsiineysa wax deris ah masiixiyada deriskeena. (Miyay xitaa ogyihiin inaan nahay Masiixiyiin? Ma waxay dareemaysaa inaan ku faraxsan nahay inaan Masiixiyiin nahay?) Waxaan ku soo kordhnaa horumarna arrintan ku saabsan, laakiin waxaan u baahanahay koritaan dheeraad ah.
Waxaan ku dhiirigelinayaa dhammaanteen inaan ka fikirno sida midkeen kasta u noqon karo markhaati Masiixi ah kuwa nagu xeeran. Waxaan ku dhiiri gelinayaa xubin kasta inay adeecaan amarka inay diyaar u yihiin jawaabta. Waxaan ku dhiiri gelinayaa xubin kasta inay aqriyaan wax ku saabsan wacdinta oo ay dabaqaan wixii ay akhriyeen. Dhamaanteen waan wada baran karnaa oo midba midka kale waanu u dhirrigalinaa shaqooyinka wanaagsan. Kooxo yaryar ayaa bixin kara tabobar loogu talagalay wacdinta, kooxo yaryar ayaa inta badan iskood u fulin kara mashruucyada wacdinta.
Xaaladaha qaarkood, xubnuhu si dhakhso leh ayey wax uga baran karaan wadaadadooda. Taasi waa hagaagsan tahay. Markaas wadaadku wax buu ka baran karaa xubinta. Ilaah wuxuu siiyey hadiyado kaladuwan oo xagga ruuxa ah. Wuxuu siiyay qaar ka mid ah xubnaheenna hadiyad wacdiyeyaal ah oo ay tahay in la kiciyo oo la hoggaamiyo. Haddii wadaadka uusan u siin karin qofka aaladaha lagama maarmaanka u ah qaabkan wacdinta, wadaadka waa inuu ugu yaraan ku dhiirrigeliyaa qofka inuu wax barto, inuu tusaale u noqdo dadka kale, iyo inuu fuliyo wacdinta si kaniisadda oo dhan ay u korto. Nidaamkan lixda qaybood ee shaqada Kaniisadda, waxaan u arkaa inay muhiim tahay in la xoojiyo wacdinta wacyi-gelinta isla markaana la muujiyo dhinacan.